Nagu saabsan | Shandong Limeng Daawada Co., Ltd.
Shirkadda Daawada Shandong Limeng waxaa la aasaasay 1993, hadda waxay leedahay daawada casriga ee Shiinaha, cuntada daryeelka caafimaadka, aqoon isweydaarsiga wax soo saarka qurxinta, qalabka caafimaadka iyo aqoon isweydaarsiga, aqoon isweydaarsiga sahayda jeermiska iyo aqoon isweydaarsiga soo saarista daawooyinka Shiinaha, dhammaantoodna waa ay gudbeen. shahaadada aqoon isweydaarsiga boqol-kunka ah. Shirkaddu had iyo jeer waxay u hoggaansameysaa fikradda horumarinta hanuuninta tiknoolajiyada sare, iyo iskaashiga cilmi-baarista warshadaha-jaamacadda. Waxay leedahay hal koox R & D xirfadle ah, laf dhabar farsamo iyo farsamo yaqaanno. Shirkaddu waxay ku dadaaleysaa inay horumariso istiraatiijiyadda astaanta, astaantana "Limeng" waxaa lagu abaalmariyay inay tahay Astaanta Caanka ee Dawladda Hoose ee Jinan sanadkii 2012.
Xilligan shirkaddu waxay leedahay qalab caafimaad iyo aqoon isweydaarsi ka badan 2,000 oo mitir murabac ah, aqoon isweydaarsiga cuntada ee daryeelka caafimaadka ee 10,000 mitir murabac, iyo foomamka qiyaasta waxaa ka mid ah kaabsulka, kiniiniga, granules iyo budo iwm Si loo ballaariyo awoodda wax soo saarka. ee shirkadda, hagaajinta noocyada iyo qaabdhismeedka wax soo saarka, shirkaddayadu waxay ballaarisay saldhigga ballaaran ee wax soosaarka oo ka badan 30,000 mitir murabac ah, noocyada wax soo saarku waxay daboolayaan daraasiin qaybood sida soo saarista daawada dhaqameed ee Shiinaha iyo ka shaqeynta qoto dheer, nacnaca, cuntada degdegga ah, shaaha beddelaadda waxyaabaha caanaha laga sameeyo, xalka afka laga qaato, emplastrum, waxyaabaha la isku qurxiyo, cuntooyinka shaqeeya iyo cuntooyinka xilliga firaaqada ah iwm.
Qalabka Qalabka ee Daawada Limeng
Shirkaddu waxay leedahay shan aqoon isweydaarsi waqtigan xaadirka ah, oo aqoon isweydaarsiga caafimaadka ee daryeelka caafimaadka uu yahay 2,000 oo mitir murabac ah, aqoon isweydaarsiga qurxinta waa 2,000 mitir murabac iyo aqoon isweydaarsiga wax soo saarka QS waa 3,000 mitir murabac, qalabka caafimaadka iyo aqoon isweydaarsiga wejiga wajiga waa 200 mitir murabac, jeermiska iyo aqoon isweydaarsiga wax soo saarka ee jeermiska la xariira waa 1,000 mitir murabac. Fasalka nadaafadda ee aqoon isweydaarsiga dhammaantood wuxuu gaari karaa boqol kun, dhammaantoodna way ka gudbeen shahaadada Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Gobolka Shandong.
Xilligan qalabka caafimaadka iyo aqoon isweydaarsiga wuxuu leeyahay shan xariiq oo wax soo saar maaskaro ah oo waji buuxa leh isla markaana leh awoodda wax soo saar maalinle ah oo gaareysa 400,000. Maaskarada wajiga ee la iska tuuri karo iyo maaskaro caafimaad oo la tuuri karo ayaa dhammaantood ka gudbay ogaanshaha.
Aqoon isweydaarsiga daryeelka caafimaadka ayaa leh in kabadan 20 kaabsool oo horumarsan, kiniin, granule, khadadka wax soo saarka shaaha ee daawada, iyo khadadka wax lagu duubo ee otomatiga ah, oo soo saari kara ku dhowaad 50 qaybood oo ah afar nooc oo qiyaaso ah. Shirkaddu waxay haysataa in ka badan 70 nooc oo qalabka soo saarista ah iyo in ka badan 20 khadadka wax-soo-saarka kaabsulka oo leh awoodda wax-soo-saarka sannadlaha ah waa 1 bilyan; Waxay leedahay shan xariiq oo wax soo saar kiniin ah oo leh awoodda wax soo saar sanadle ah waa 200 milyan; Waxay u kala horreeysaa 10 khadadka wax soo saarka granule iyo 10 khadadka wax soo saarka shaaha daawo leh oo leh awoodda wax soo saarka sanadlaha waa 300 tan
Waxaa jira dhowr nooc oo ah qalab wax soo saar oo horumarsan oo soo saari kara qeybta guud ee dareeraha iyo kareemka & looshinka qeybta aqoon isweydaarsiga, badeecadaasna waxaa ka mid ah gacmo nadiifiye, jel lagu nadiifiyo, iyo wejiga wajiga iwm.
Waxay u kala horreeysaa hal aqoon isweydaarsi cabitaan deg-deg ah iyo aqoon isweydaarsi 1 nacnac QS ah. Iyada oo loo soo bandhigayo qalabka wax soo saarka buuxa ee otomaatiga ah ee horumarsan gudaha iyo dibaddaba, noocyadeeda qiyaasta qiyaasta daawada waxaa ka mid ah cabitaan adag, nacnac jel, nacnac kiniin iwm
Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 200 oo shaqaale ah hadda, kuwaas oo ay joogaan 30 shaqaale maamul, 30 shaqaale cilmi baaris, 50 shaqaale iib ah iyo in ka badan 150 shaqaale wax soo saar ah. Dhammaan shaqaalaha maamulka iyo cilmi-baarista sayniska waxay leeyihiin shahaadada kuleejka ama ka sare, taas oo 13 qof ay leeyihiin cinwaanno xirfadlayaal sare ah iyo 25 qof oo leh darajooyin xirfadeed oo heer-dhexaad ah; shaqaalaha wax soo saarku waa dhammaan ardayda ka qalin jabisay kulliyadaha caafimaadka iyo dawooyinka ee Gobolka Shandong, iyo sidoo kale inay ka bilaabaan shaqo tababbarka u qalma.
Shirkaddu waxay u ololeysaa fikradda maaraynta shirkadda "Ku noolow Tayada, Ku Horumari Daynta, Ku Jihaysan Teknolojiyada, Faa'iidooyinka Maamulka". Waxay si adag u hirgelinaysaa sharciyada la xiriira iyo xeerarka sharciga ah ee lagu fulinayo wax soo saarka iyo maareynta, waxay soo bandhigeysaa habka maareynta horumarsan ee si wax ku ool ah isugu dhafan tiknoolajiyadda, wax soo saarka, suuqa shirkadda, laguna gaarayo natiijooyinka muhiimka ah, taas oo aasaas adag u ah shirkadda inay horumariso ilaa heer kale oo cusub isla markaana abuuraan qarni qurux badan.